Wonke umuntu okungenani kanye empilweni yakhe walungisa ekhaya noma wenza umsebenzi ohlobene nokulungisa indlu yakhe noma i-dacha. Namuhla umsizi ongenakunqunyelwa ekukhoneni uyisikrini se-screwdriver. Ukuthenga, qiniseka ukuthola amandla, ukumiswa, kanye nesikhathi sewaranti samathuluzi kagesi.
Ngaphambi kokusebenzisa i-screwdriver, qiniseka ukuthi ufunda ulwazi lokuphepha encwadini yokufundisa enamathiselwe ithuluzi. Ngokuvamile leli thuluzi lisetshenziselwa ukukhiqizwa. Njengomthetho, imfundo ethi "Indlela yokusebenzisa isibukovuli" kufanele ibe yinto edingekayo ezenzweni zokuvikelwa kwabasebenzi. Ukugwema izingozi, ukusebenza nge-screwdriver, kufanele uhambisane nayo yonke imithethonqubo yokuphepha. Ungathembeli ithuluzi kubantu abangazi ukuthi basebenzise kanjani isibukofu, futhi abakwazi ukuhambisana nemithetho yokuphepha. Isibonelo, izingane, asebekhulile, abantu abagulayo kanye nabantu abasesimweni sokudakwa.
Sebenzisa leli thuluzi, ukuhlinzeka ngama-overalls kanye nezibuko ngaphambilini. Khumbula ukuthi noma yiluphi ithuluzi, noma ngabe liyini, liwumthombo wengozi.
Indlela yokusebenzisa ibhethri ye-screwdriver
Ngaphambi kokuqala umsebenzi, qiniseka ukuthi ibhethri ye-screwdriver yakho ishaja ngokugcwele. Faka ithaja bese unaka inkomba. Umbala oluhlaza wenkomba ubonisa ukuthi ibhethri ithengiswa. Umbala obomvu wenkomba ubonisa ukuthi udinga ukukhokhiswa.
Ukuze ukwandise isikhathi sokusebenza se-screwdriver, kwanele ukuba nebhethri yesibili. Ngemuva kokuqala kokukhishwa futhi uyilithatha ngomunye wesibili, owokuqala ufakwa eshaja. Ngemuva kokuthi ibhethri ithengwe, ungayibambi eshaja. Lokhu kunciphise impilo yebhethri njengamanje. Okunye okulimazayo empilweni yebhethri kushisa kakhulu noma izinga lokushisa lokushisa kakhulu, lapho i-screwdriver isebenza khona. Imodi yokusebenza kwebhethri elilodwa lenzelwe amahora amahlanu.
Ungayilungisa kanjani kancane noma ibhakhodi
Ungalungisa i-drill noma uhambe ku-screwdriver ngezindlela ezimbili. Indlela yokuqala iyisiqondiso. I-bit ifakwa engxenyeni futhi iqiniswe ngesandla. Indlela yesibili ukuqinisa i-bit noma i-drill nge-cartridge ejikelezayo, yibambe ngesandla sesibili. Hlola ukuthi uvikele kanjani ibhe, kulula kakhulu. Zama ukuphikisa isikhunta esisodwa, futhi uzoqonda ukuthi ngabe i-bit iyaphenya noma cha.
Indlela yokusebenzisa i-screwdriver ngendlela efanele
Esikhathini se-screwdriver kunesilinganiso ongasungula ngawo amandla okujikeleza ngqo. Ukuvula i-knob, ukhetha imodi oyidingayo kuye ngomsebenzi ohlose ukuwenza. Ngomlawuli ofanayo, ungakhetha imodi yokudoba. Nje ungazami ukufaka izikulufa ezinzima, ukukhonkolo nokwakhiwa kwamatshe, ukuze ungakukhubaza. Ukumba izindawo eziqinile, kunamathuluzi akhethekile okwenzelwe lokhu. Ungashintshi umlawuli ngenkathi i-screwdriver isebenza. Lokhu kungabangela ukuthi ithuluzi lingasebenzi kahle. Ukwazi ukuthi ungasebenzisa kanjani isikrini esibucayi, ungakwazi ukunweba impilo yakho yesevisi.
Ngosizo lomshini okhethekile, ungakhetha izindlela ezintathu zokusebenza. Imodi ye-Twist, i-twist mode ne-lock mode ye-screwdriver. Imodi yesithathu iyadingeka ukuze kuvikeleke. Zonke lezi zindlela zilula kakhulu ukushintsha uma ubamba isikrini esibukeka ngesibambo esiphezulu kwebhethri. Isibambo sivame ukumbozwa ngezinto eziphathekayo futhi ngakho-ke kuphephe kakhulu ukusebenza. Iqinisekisa ukuthi isihlakuleli asikhiphi esandleni sakho ngesikhathi esingekho emthethweni kakhulu. Ukuze uqiniseke ngokwengeziwe, ungakwazi ukufaka isikhuntazi ngesandla sakho nge-strap ekhethekile.
Uma unquma ukusebenzisa i-screwdriver njenge-drill ukufaka imbobo enkuni noma epulasitiki, ngakho-ke ukuze imbobo ibe nekhwalithi enhle, udinga ukubeka uhlaka lwezinkuni ngaphansi kwezinto ozenzayo. Ngakho-ke ungakwazi ukugwema ukucubungula nama-chips ngesikhathi sokugaya.
Izimbobo zensimbi zifaka ukuhambisana nemithetho ethile. Indawo yesikhombiso esizayo kumele isetshenziswe. Lokhu kuzosiza ekugwemeni ukuhambisa isikhwama phezu kwensimbi. Ukukhetha imodi yokugaya esibukweni se-screwdriver, ungakhohlwa ukuthi uma ubhalela insimbi, imishini yokuloba esakhiweni sensimbi ivame ukuphulwa. Ukuze ugweme lokhu, zama ukungacindezeli ngokuqinile esibukweni sesikhunta ngenkathi kubhalwa. Uma umgodi ubambekile, i-screwdriver ingakwazi ukungena ngaphansi kwimodi yokuguqula. Uma uphonsa isiqeshana esincane, bese usibamba, sebenzisa i-vice.
Lezo zindlela zokuhlakulela, ezithengiswa namuhla ezitolo, zikuvumela ukuthi uthathe isikhala esivumelwaneni ukuze zihambisane komunye nomunye. Futhi ukulungisa i-screwdriver ukuze kuqiniswe i-samorez ngayinye kwakuhle, kwaba lula kakhulu.
Ungacabangi ukuthi i-screwdriver ingasetshenziswa, kuphela ukushayela, ukuguqula nokuguqula izikrini. Ngesikhathi ulungisa imoto, kungenzeka ukuguqula uphinde uqine amantongomane nama-bolts, ugaya okunamathiselwe okuhlukahlukene. Imfenisha yokwakha ngaphandle kokusebenzisa isikebhe esibucayi ithatha isikhathi eside kakhulu. Ukulenga izingongolo zamakhethini noma amasheyibhethi ane-screwdriver kulula kakhulu kunokusebenza nge-screwdriver nokusebenzisa umzamo. Ngakho-ke namuhla, umshayeli wesibhamu wenza isikhundla sakhe senhlonipho phakathi kwamathuluzi adingekayo kakhulu endlini.
Ukuhlanza okwesikhashana kwesikebhe esibucayi ngesigqoko esithambile kuzokwandisa ukuphila komsebenzi wayo. Ungavumeli amanzi nomswakama ukungena esibukweni se-screwdriver. Gcina endaweni eyomile. Ungabeki phansi isikrini se-screwdriver. Ukuzama ukusingatha isikrini esibucayi kahle, futhi landela ishaja kanye nekhebula layo lamandla. Uma ubona kokubili ukungasebenzi kahle ekusebenzeni kwe-screwdriver uqobo, nokusebenza kabi kwejaja, zama ukuxhumana nesikhungo senkonzo. Ukuphendukela kochwepheshe, uzothola ukulungiswa kwekhwalithi eliphezulu kanye nezingxenye zokuphepha ezisezingeni eliphakeme, okuzokwenza kakhulu kwandise impilo ye-screwdriver yakho.
Ukugeza kubhekwa kanjani ngaphakathi?
Lennox-Gastaut syndrome (isithuthwane)
Ibhisikidi emanzi. Ukupheka kwekhekhe lebhasikidi
Ihhotela Palace Kranevo 3 * (Bulgaria, Albena): izithombe kanye nokubuyekeza
Ihhotela Abou Sofiane 4 * e Tunisia: izithombe, ukubuyekeza, ukubuyekezwa
Article 213 we Criminal Code. Hooliganism. code lobugebengu
"Zebra" ukhilimu omuncu: I zokupheka umhlabeleli
Amafoni "windose": onobuhle nemibi